ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန်ဟွန်ဒါစီဗစ် များ | ဟွန်ဒါစီဗစ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Hybrids/green Cars (50)
Silver Honda Civic 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl white Honda Civic Hybrid 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်...
Silver Honda Civic Hybrid 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Honda Civic Hybrid 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Silver Honda Civic 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Honda Civic 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Black Honda Civic Hybrid 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Honda Civic 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Honda Civic Hybrid 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Honda Civic 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Honda Civic 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Blue Honda Civic 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Silver Honda Civic Hybrid 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ ...
Silver Honda Civic Hybrid 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Honda Civic Hybrid 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl White Honda Civic 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Blue Honda Civic 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 156 ညှိနှိုင်း
မြန်မာနိင်ငံက ဟွန်ဒါ စီဗစ် ဟိုင်းဘရစ်ကားများ
ပြည်တွင်းမှာ ဟွန်ဒါတံဆိပ်ထဲက စီဗစ် ဟိုင်းဘရစ်ကားဟာ လူသုံးများတဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ဆီစာ သက်သာခြင်း ၊ ဒီဇိုင်းလှပ မူတွေကြောင့် ဟွန်ဒါ စီဗစ်ကို လူအများအပြားဟာ နှစ်ခြိုက်စွာ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနေလျက် ရှိပါတယ်။ ဈေးလည်း သင့်လျှော်ပြီး ဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်မူကြောင့် လူလတ်ပိုင်းနဲ့ လူငယ် ပိုင်း အသက်အရွယ် ပိုင်းများ အများဆုံး အသုံးနေကြပါတယ်။ စလစ် လွတ်သွင်းနိင်ခြင်းကြောင့် မော်ဒယ် မြင့်များ စီးနင်ခြင်းကြောင့် စတဲ့ အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ မော်ဒယ် တစ်နှစ်အောက်ကာ စသွင်းကြပြီး ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ စတဲ့ ခုနှစ်များကို အသွင်းများကြပါတယ်။ အတွင်း ဂရိတ်တွေကလည်း ခေတ်မီပြီး တီဗီ စတဲ့ နည်းပညာမြင့် ဂရိတ် မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် စီးနင်းမူ များရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ စီဗစ် ဟိုင်းဘရစ်မှာ မျိုးဆက် (၃) ဆက်ရှိပြီး လက်ရှိ ပြည်တွင်း ပေါ်လစီအရ ဒုတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၁၁ လောက်ထိ မော်ဒယ်ကို အများဆုံး တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါက စီဗစ် ဟိုင်းဘရစ်ကို ဂျပန်မှာ ၂၀၀၁ လောက်က စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ စီဗစ်မှာပေါင်းထည့်ထားတဲ့ မော်တာ ထောက်ကူမူဟာ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်နဲ့ တူညီပါတယ်။ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၅ ထိ မော်ဒယ်ကို မန်နျူးယယ် ဂီယာ (၅)ချက် ဂီယာကို စတင် သုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်မော်ဒယ်တွေမှာတော့ အော်တို မတ်တစ် ဂီယာတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂၀၁၃ မတိုင်ခင်မှာ ဆီဒန်ကား အမျိုးအစား ထဲမှာ ဈေးကွက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိက မှာ ဒုတိယ အရောင်းရဆုံးကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်ထိကို ၀ယ်ယူ စီးနင်း နေကြပါတယ်။ ၁.၃ လီတာ၊ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် ဖြစ်ပြီး ဂီယာကတော့ အော်တို ဂီယာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုင်းဘရစ်ကားတွေက ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေနဲ့ လည်ပတ်ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ဆီစားမူ စွမ်းရည် အသုံးပြုမူကို လျော့ချပေးနိင်တဲ့ လျှပ်စစ် မော်တာ ပါဝင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်မှာ မော်တာတွေ တွဲလျက် အလုပ်လုပ်စေရန် ချိတ်ဆက်ထားပြီး မောင်းနှင်နေရာက ဘီးတွေကို အရှိန်လျော့ချလိုက်တဲ့ အခါ လျှပ်စစ်မော်တာဟာ အရှိန်လျော့တဲ့ ဘရိတ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အတွက် အလဟသ ဖြစ်သွားတဲ့ ပါဝါတွေကို အလကား မဖြစ်စေဘဲ လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကို မရောက်ခင်အထိ ဘတ္တရီ ထဲမှာ သိမ်းပေးပါတယ်။ ဒီအတွက် မလိုအပ်ဘဲ လောင်စာများ အလဟသ ဖြစ်စေမူကို လျော့ပေးနိင်တာဟာ ဟိုင်းဘရစ်တွေရဲ့ အားသာချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်တွေကတော့ MXB, MX, MX, MXST စတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် မော်ဒယ်ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မော်ဒယ်လောက်ထိကို အများဆုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဌင်းမော်ဒယ်တွေရဲ့ ပုံစံကတော့ ဆီဒန် ဇိမ်ခံ ဆလွန်းပုံစံပေါက်ပြီး ရှေ့မီးလုံးတွေက မျက်နှာပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်း ဆန်းပါတယ်။ လူကြီး လူငယ်မရွေးသုံးလို့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နှင်းခွဲမီးတွေပါ ပါလာပြီး အတွင်းဖက်ကလည်း သူရဲ့ ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အတွင်းဖက် ဒတ်ရ်ှဘုတ်တွေကို ပါးလွားပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မော်ဒယ်မြင့်တွေမှာ စီယာတိုင် ခလုတ်တွေပါ ပါရှိလာပါတယ်။ တီဗီတွေကိုလည်း စံနှုန်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဟွန်ဒါ စီဗစ်တွေဟာ သူ အလွိုင်းဝှီးနဲ့ အများဆုံးလာတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မော်ဒယ် အလွန်ကားတွေကတော့ ဒီဇိုင်းပိုပြီးဆန်းသစ် ထပ်ကွန့်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုက်ဘရစ် စနစ်တွေပါရှိတဲ့ အတွက် ကားရဲ့ လောင်စာ သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် စီအိုတူး ထုတ်လုပ်မှု ကို အများကြီး သက်သာစေတဲ့ ကား အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ပါဝါလည်း သင့်လျော်ပြီး ၂၀၀၈အကျော်ကို ကောင်းကောင်း အခွန်ပိုဆောင်စရာ မလိုဘဲ လေလံကနေ တိုက်ရိုက် သွင်းနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ခန်းမှာ ပစ္စည်းတွေကို အနေအထားတစ်ခုထိ တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လူ(၅) ယောက်စီး ဈေးနှုန်း သင့်တင့်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းရတာ စီယာတိုင် ပေါ့ပါး သွက်လက်လာတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ စီဗစ်ဟာ ဂရိတ်ပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်း အစားစား ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ဈေးနှုန်းများကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၂၀, ၁၃၀ ကနေ ၁၈၀ , ကျပ်သိန်း ၂၀၀ လောက်ထိ ရှိပါတယ်။ မော်ဒယ် နှစ် တစ်ခု ခြင်း စီအလိုက် ဈေးကကွာဟသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ အမည်းရောင် စီဗစ်က ဈေးပိုကောင်းပါတယ်.။ လူ (၅) ယောက် စီးနင်းနိင်မည် အပြင် သိပ်သည်းတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဖက်မှာ ဆလွန်ကားတွေကဲ့သို့ ပစ္စည်းတင်ဖို့ နောက်ခန်းလည်း ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေ၇ာင်အားဖြင့် အမည်းရောင်၊ ငွေရောင်၊ မိုးပြာရောင် စတဲ့ အရောင်များကို ပြည်တွင်းမှာ နှစ်ခြိုက်စွာ သုံးစွဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမည်းရောင်ကတော့ အနည်းငယ် ပိုဈေးကြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။